Al-Shabaab oo dagaalka warbaahinta la aaday Twitter - Sabahionline.com
Al-Shabaab oo dagaalka warbaahinta la aaday Twitter
Waxaa qoray Maxamuud Maxamed oo Muqdisho jooga
Maarso 20, 2012
Al-Shabaab oo bishii February si buuxda ula middowday al-Qaacida, ayaa ilaa iyo bishii December aad ugu firfircoonayd dhinaca Twitter, tallaabo ay dadka gorfeeya arimaha ammaanku ay sheegeen inay tahay isku day ay al-Shabaab isku dayayso inay ku soo jiitaan dadka dhalinyarada ah ee ku nool goobaha ka baxsan Soomaaliya, sidoo kalena faafiyaan dacaayad dhaqaalena ku helaan.
Dagaalyahannada al-Shabaab oo February 2012-keedii ku ururay deggaanka Ceelasha Biyaha. [Mohamed Abdiwahab/AFP]
ICC oo soo saartay digniin kadib markii shakhsiyadda mid ka mida markhaatiyada dacwadda Ruto bannaanka loo soo saaray
Bilowgii al-Shabaab waxay isticmaali jirtay website-yada si ay uga baahiyaan macluumaadka, ka dibna waxay u jahaysteen samaynta xarumo idaacadeed oo ku yaala deggaanada, sida al-Andulus oo kale, taasi oo faafisa wararka la xariira dhaqdhaqaaqyadooda iyo fariimaha maqalka ah ee ka yimaada madaxtooda caanka ah. Sannadkii 2010 waxay ku dareen Mawjada Wararka ee al-Kataib oo telefishan ahaan loo daawado.
Dadka al-Shabaab kala socda dhinaca Twitter ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ururka argagixisadu uu yahay isku day ay isku dayayaan inay sameeyaan weerar-celis iyo isku dheelli-tir sida uu sheegay Gaashaanle Emmanuel Chirchir oo ah af-hayeenka ciidamada millitariga ee Kenya oo si caadi ah Twitter ugu soo qora qoraalo ku saabsan Hawlgalka Linda Nchi ee Soomaaliya. Wadajir ahaan, bogga fariimaha al-Shabaab ee Twitter-ka waxaa ku jira qoraala xayaysiinaya hawlgalada ay ka wadaan deggaanadooda kuwaasi oo inta baddan ay sawiro la socdaan.
“Go’aanka ay al-Shabaab ku gaartay ee ah inay ka mid noqdaan barbaahinta dadwaynaha ee caalamka waxaa laga yaabaa inay tahay isku day ay isku dayayaan inay kordhiyaan xayaysiinta dhaqdhaqaaqyada kooxda iyo inay isticmaalaan nooc warbaahineed oo kale iyo mawjado warar,’ ayuu yiri Xassan Cismaan oo siyaasadda qorfeeya arimaha al-Shabaabna kala socda Twitter-ka. “Tani waa isku day ay ku faafinayso fikradaheeda iyo barnaamijyadeeda si ay u soo jiitaan dadka deggaanka ee ayaga taageersan sidoo kalena ay fikradahooga iyo dhaqdhaqaaqyadooda ugu fidiyaan dibeddaha. “Waxaa loo arkaa tartan adag oo ka dhex jira qaybaha kala duwan ee khilaafku uu ka dhexeeyo ee ku sugan Soomaaliya ay ugu tartamayaan inay ku guulaystaan soo jiidashada niyada dadka.” Cismaan wuxuu sheegay in al-Shabaab ay ka faa’iidaysanayso jiritaanka baahsan ee warbaahinta dadwaynaha si ay fariimahooda ugu gudbiyaan dhagaysayaal inta caadiga ah ka baddan. “Tallaabadani ay al-Shabaab qaaday waxay ku raadinaysaa inay hawlahooda shakiga ka saaraan sidoo kalena ay xayaysiiyaan dhaqdhaqaaqyadooda dacaayadeed si ay ugu guulaysan karaan dagaalka dacaayada una hantaan niyada dadka Soomaalida, gaar ahaan dhalinyarada oo ah kuwo aad ugu dhuun daloola isticmaalka website-yada warbaahinta dadwaynaha,” ayuu Cismaan u sheegay Sabahi. “Al-Shabaab waxay isticmaashaa shabakadaha Internet-ka iyo website-yada warbaahinta dadwaynaha, sida Twitter oo kale kaasi oo ay u isticmaalaan dacaayad ahaan awgeed taasi oo ujeedadeedu tahay in ku qortaan dayaalyahanno dheeraad ah, lacagna ugu helaan sidoo kalena ku xayaysiiyaan fikradahooga una turxaan-bixiyaan fikradaha dadku ay ka qabaan,” ayuu Cismaan intaasi ku daray.
Isticmaalka al-Shabaab ee luqada Af-Ingiriiska
Dadka wax gorfeeya iyo masuuliyiin dhinaca ammaanka qaabilsan ayaa Sabahi u sheegay in addeegsiga ay al-Shabaab adeegsanayso Af-Ingiriisku uu tilmaan u yahay in dhagaystayaasha ay beegsanayaani ayna Soomaali ahayn ee ay yihiin dhalinyaro dalka dibeddiisa ku sugan. “Qofna ma dhayalsan karo rabitaanka al-Shabaab ee ah isticmaalka website-yada elektarooniga ah,’ ayuu yiri Ibraahim Axmed oo ah Gaashaanle-sare oo ka hawlgabay Ciidamada Qaranka Soomaaliyeed.
Al-shabaab waxay “billowday inay isticmaasho website-yada si ay ugu faafiso fikradaheeda dacaayadeed sidoo kalena warbixinadoodana ugu soo gudbiyaan Af-Ingiriisi ahaan, inkastoo bilo yar ka hor ay mamnuuceen in dugsiyada lagu dhigo luqada Af-Ingiriiska iyadoo marmarsiiyo looga dhiganayo in luqadu ay tahay ta ay isticmaalaan gaalada iyo basaasiintu,” ayuu Ibraahim u sheegay Sabahi. “Ka mid noqoshada ay al-Shabaab ka mid noqotay Twitter-ku wuxuu macnaheedu yahay in argagixisadu ay dareemeen baahida ay u qabaan isticmaalka website-ka si ay u qortaan dagaalyahanno dheeraad ah iyo si ay dhaqdhaqaaqyadooda ugu gudbiyaan meelaha dibedda ka ah gobolka.” Cabdilaahi Yabarow oo bulshada u dooda ayaa sheegay in isticmaalka ay al-Shabaab isticmaasho Twitter-ka kaasi oo aan lahayn dad baddan oo Soomaali ah oo la socda hawlihiisa uu tilmaan u yahay in kooxda ay rabto inay la xiriirto tiro intaasi ka baddan oo ah dadka isticmaalaha warbaahinta dadwaynaha, iyadoo aan la eegayn meesha ay joogaan. “Waxaan u malaynayaa in u dhaqaaqa ay kooxda Islaamiyiinta ah ee al-Shabaab u dhaqaaqeen inay isticmaalaan website-yada warbaahinta dadwaynaha loo sameeyay in uu gaaro dhagaystayaasha aan Soomaalida ahayn, gaar ahaan ka dib markii ay kooxdu rumaysatay doorkii ay website-yadani ka qaateen kacdoonadii Carabta taasi oo si fudud loogu addeegsan karo inuu gaaro dhagaystayaal baddan,” ayuu Yabarow u sheegay Sabahi. Cali Cabdi oo ah macalin maadada cilmi nafsiga ka dhiga jaamacada Muqdisho ayaa sheegay in isticmaalka website-yada warbaahinta dadwaynuhu ee kooxaha sida al-Shabaab oo kale ay noqotay mid ka mid ah noocyada ugu khatarta baddan ee khiyaano ee la sameeyo.
“Way kala garteen macluumaadka qaabkooda la badalay, been abuuristii xaqiiqooyinka iyo soo werintii dhacdooyinka ku lidka ahaa run ahaantii waxa ka dhulka ka dhacayay si ay maskax ahaan uga guulaystaan kooxda kale,” ayuu macalinku u sheegay Sabahi. Isniintii, al-Shabaab waxay u soo leexatay Twitter-ka si ay uga jawaabaan sheegashadii mid ka mid ha xubnahooda. Omar Hamam oo loo yaqaano Abu Mansoor al-Amriki ayaa Sabtidii cajalad fiidiyoow ah soo galiyay tiro ka mid ah website-yada Soomaalida iyo Youtube-ka isagoo sheegay in naftiisu ay khatar ku sugan tahay taasi oo kaga imaanaysa isla xooggaga saaxiibadiis ah. Ka dib markii cajalada fiidiyooga la sii daayay, al-Shabaab waxay muujiyeen sida ay "ula yaabeen" waxayna inkireen in ay nolosha Hamam khatar ku sugnayd.
May 16, 2012 @ 05:10:35AM
Hadii aydaan ka adkaan karaynin, ku biira iyaga! Alshabaab waa koox argagixiso ah oon faa’ido lahayn.
May 5, 2012 @ 10:28:09AM
MAWAXAY KULA TAHAY IN AAD QABSAN KARTID KENYA….? SI FIICAN U FAKAR, QOORTA AYAANU IDIINKA TAAGANAHAY EEYAHAW XUNKA AH.
May 5, 2012 @ 05:13:16AM
Maxaynu ooga hadlaynaa waxan raqiiska ah baranbarooyinka yaryar ee waxba ku fiicnayn……..?
April 30, 2012 @ 07:57:38AM
Ha la joojiyo dilka, waayo dilku waa wax ka baxsan ilaahay qaynuunkiisa, waana wax ilaahay ina waydiin doono.
April 24, 2012 @ 03:45:38AM
aniga waxay ila tahay kooxda alshabaab waa qabqablayaal dagaal, waxaanay rabaan in ay dalka burburiyaan. Anakana uma baahnin wax alshabaab la dhaho ama wax argagixisa ah, markaa waan la dagaalami doonaa, maxaayeelay waxaan rabnaa in aan helno nabad iyo daganaansho ilaahay idankiis.
AbdullahI Mohamed Abdirahman
April 1, 2012 @ 05:55:11AM
Al-shabaab waxay diinta u adeegsadaan sida qalab siyaasadeed oo ay dadka ku aruursadaan midaas oo kasoo horjeeda tacliimta diinta islaamka. waa waqti aad u habboon in ay beesha caalamka soo dhex galaan kadibna joojiyaan jinkaan degay maskaxdooda, kadibna ay maxkamad horkeenaan kuwii soo maleegay.
March 30, 2012 @ 07:33:17AM
Waqtigan waa waqti adag xaalada Soomaaliya, ciidan badan waa in lagu xoojiyaa si Al-shabaab looga saaro Soomaaliya... hambalyo ayaan leeyahay ciidamada Kenya iyo kuwa Midowga Afrika.
March 28, 2012 @ 07:00:15AM
Aniga waxaan u naxayaa haweenka iyo carruurta. Fadlan Al-shabaab waa in ay si nabad ah uga tagtaa Soomaaliya si ay haweenka iyo carruurta u helaan nabad iyo in sidoo kale ay helaan waxbarasho
March 25, 2012 @ 03:32:37PM
Al-shabaab waa koox mudan in la baabi'iyo. Waa in si dhammeystiran loo burburiyaa lagana iloowaa Soomaaliya si Soomaaliya loogu noolaado noolal farxad iyo dimuqraadiyad leh.
March 24, 2012 @ 06:26:42AM
Nacad haku dhacdo Xarakada Al-shabaab, waa nidaam Takfiirinimo iyo xag-jirnimo isku darsaday, kaas oo muddan in lagu eedeeyo dhammaan dembiyada ay falleen Al-shabaab iyo taageereyaashooda argagaxisada iyo dembiilayaasha ah. Waxaan nacladayaa xarakada argagaxisada ah ee Al-shabaab iyo ficiladooda ee saameynta ku yeeshay muwaadiniinta aanan waxba galabsan. Ilaahay ha naclado kuwa dilka u geysta carruurteen, haweenkeena iyo dhalinyaradeena. Ilaahay ha naclado xarakadan ee ujeedkooda ah badinta fikradahan foosha xun ee marin habaabiyay bulshadeena. Ilaahay ha nacado kuwa u horseeday Soomaalida aan aadka u jecel nahay xaaladan xanuunka badan leh.
March 23, 2012 @ 02:07:02PM
Dhammaan dadka kunool Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada dagaalamaya waa in ay raadiyaan xal dibloomaasi ah si ay u xaliyaan kala duwanaanshahooda halkii ay kadagaalami lahaayeen.
March 22, 2012 @ 11:00:46AM
SOOMAALIYA WAY KA WAYN TAHAY AL-SHABAAB. IN KA BADAN LABAATAN SANNO SOOMAALIYA WAXAA LAGU XUMEEYAY MAGACYO QOSOL BADAN OO LID KU AH HORUMARKA OO SIDOODA OO KALE DOQOMIIN U AH. MAXAY U NOQON WAAYEEN RAG DHISTA WADDANKOODA QORI LA'AAN? HA IS DHIIBAAN MAR HORE AYAABA SI DARAN LOOGA badiyay. KALIYA LAMA DUUGIN MOOYAANE.
March 22, 2012 @ 03:19:11AM
Haa waan kugu raacsanahay laakiin." HADII AADAN JEBIN KARIN KU BIIR AYAGA" hadaba Alshabaab waa in ay dhiibaan hubkooda kadibna laga mamnuuco ciidankooda in ay wax dhaq-dhaqaaq ah sameeyaan si loo badbaadiyo sumcadda wadanka Soomaaliya.
March 22, 2012 @ 03:17:56AM
U daa howshooda ha wateene. Isku soo duuboo waa rag
March 21, 2012 @ 08:07:58PM
Falalka ay Kooxda Al-shabaab ku kacaan waxay ku tusinayaan heerka uu gaadhsiisan yahay nacaybka iyo calool xumada iyo dhambiga ay u hayaan ummadda. Waxaanay rabaan in ay diinta Islaamka sawir xun ka bixiyaan dhibaatona u gaystaan, kana dhigaan diin ku salaysan dagaal iyo dambiilenimo iyo dil iyo bahalnimo iyo dhiig la daadiyo iyo cagajuglayn. Al-shabaab waxay waxaasoo dhan uga dan leeyihiin kaliya sidii ay u heli lahaayeen maal.